Tsy fandriampahalemana : taona 2016, taonan’ny… fitsaram-bahoaka | NewsMada
Tsy fandriampahalemana : taona 2016, taonan’ny… fitsaram-bahoaka
Par Taratra sur 14/12/2016
Azo lazaina fa taona nampirongatra ny fitsaram-bahoaka ity taona 2016 madiva hifarana ity. Ny tsy fahatosan’ny vahoaka ny mpitandro filaminana, ny fitsarana, eny ny mpitondra fanjakana mihitsy koa aza, no anton’izany.
Azo lazaina ho taon’ny fitsaram-bahoaka ity taona hadiva hifarana andro vitsivitsy ity. Nisy ny dahalo, ny jiolahy, tao koa ireo olon-tsotra. Anisan’izany ilay nitranga tao Moramanga ny volana febroary 2016 lasa iny, teratany karana iray nahafaty olona dimy sy nandratra olona maromaro tamin’ny fiara 4×4 Ford Ranger vokatry ny fandehanana mafy ka tsy nahafehy ny familiana intsony ilay Karana. Nodoran’ny olona avy hatrany ny fiara nentiny, saingy mbola afa-nitsoaka tany amin’ny biraon’ny polisy ity Karana nahavanon-doza ity. Nangataka ny hamoahana azy tao amin’ny polisy ny olona mba hanaovana fitsaram-bahoaka. Teo koa ilay nitranga tao Ankazomborona Marovoay ny volana oktobra teo, lehilahy iray matin’ny fitsaram-bahoaka ka niafara tamin’ ny fahavakisan’ny birao sy ny fahapotehana fitaovam-piasan’ny zandary. Tany Sambava, mpangalatra lavanila tratran’ny olona teo am-pangalarana lavanila ka tsy namelan’ny fokonolona raha tsy tapitra ny ain’ireo jiolahy. Nanampy izany koa ireo telo mirahalahy tratran’ny olona nangalatra taolam-paty ka nifanenjehan’
ny fokonolona manerana ny tanàna ary niharan’ny fitsaram-bahoaka. Ny tany Vavatenina, telo lahy nisandoka ho zandary matin’ny fitsaram-bahoaka. Ny tao Mampikony, ny volana novambra teo, nitaky ny hamotsorana ireo roa lahy namono nahafaty dokotera mba hanaovana fitsaram-bahoaka ny fokonolona, saingy tsy nanaiky izany ny zandary ka niafara tamin’ny fanafihan’ireo andian’olona marobe ny tobin’ny zandary izany. Voaroba ny trano fonenan’ireo zandary ary tsy vitan’izany fa mbola nodoran’ny olona koa ny fiaran’izy ireo. Nisongadina tamin’ity fitsaram-bahoaka ity ilay renim-pianakaviana, voalaza ho nanota fady tamin’
ny alalan’ny fitondrana kisoa ny toerana masina ao amin’ny foko Antambahoaka ao Mananjary, ny volana novambra lasa teo. Novonoin’ny olona izy ary nodorana teo amoron-dranomasina ny fatiny ary farany ireo jiolahy roa navoakan’ny fokonolona tao amin’ny hopitaly ao Befandriana Avaratra ka niharan’ny fitsaram-bahoaka avy hatrany. Tsy nahasakana ireo andian’olona marobe intsony ny zandary.
Marobe ny fitsaram-bahoaka tamin’izao fitondrana izao…
Santionany amin’ny fitsaram-bahoaka nitranga teto amintsika ireo. Efa maro ihany ireo mpitondra fanjakana nifandimby teto, saingy tamin’
ity fitondrana Rajaonarimampianina ity no tsikaritra fa nampirongatra ny fitsaram-bahoaka. Tsy matoky ny mpitondra fanjakana sy ny mpitandro filaminana indrindra ny fitsarana intsony ny olona ka izao sisa ny hevitra hitan’ny olona manoloana ny tsy fandriampahalemana? Tsy misy ny fandraisana andraikitra matotra amin’ny fanjakana. Tsy vitan’ny mievotrevotra fotsiny rahateo ny raharaha toy izao satria mahatsiaro maharary sy mangirifiry ireo olona mitondra faisana amin’ny afitsoky ny dahalo. Variana amin’ny adilahy politika sy ny afera maizina miaraka amin’ireo mpijirika ny harena eto amintsika ny mpitondra fanjakana ka tsy mahita intsony ilay fahoriana iainan’ny vahoaka. Vokany, mahatsiaro ho kamboty lavitra ny fanjakana ny olona ka fitsaram-bahoaka toy izao no iafarany. Na teo aza anefa izany, nanentana ny olona tsy hanao fitsaram-bahoaka ihany ny mpitondra fanjakana amin’ny maha tany tan-dalàna antsika. Tokony hanome ohatra fakan-tahaka ny vahoaka, araka izany, ny mpitondra mba hananan’izy ireo fahatokisan-tena mba hisorohana ny fitsaram-bahoaka sesilany toy izao.